တောင်တွေကာရံထားတဲ့အင်းထဲမှာအများနဲ့မတူကယက်လှော်ကြမယ် Kayaking In The Inle Lake🚣‍♂️ – YANGON STYLE
အိမ်တွေကြားမှာ ကယက်လှော်ရတဲ့ ခံစားချက် အရမ်းမိုက်
အင်းလေးကန်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင် ကယက်လှော်ခက်ပြီး သွားဖို့ စဉ်းစားဖူးလား? အမြဲလှေစီးပြီး ပုံမှန်သွားလည်နေကြ နေရာတွေကြီးပဲ သွားနေရတာမပျင်းဖူးလား
အသစ်အဆန်းလေးလည်းဖြစ်အောင် Adventure ဆန်ဆန်လေးတွေလည်း ကြိုက်တဲ့လူဆိုရင် အခုပဲလက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်လိုက်တော့နော်။ ဒီလို လူရှင်းတဲ့အချိန်သွားရင် အရမ်းမိုက်ပဲ
TDတို့တွေ များသောအားဖြင့် အင်းလေးကန်ကိုအလည်သွားတယ်ဆိုရင် ဖောင်တော်ဦးဘုရားဖူးမယ်၊ ယက်ကန်းစင်တွေသွားလေ့လာမယ် အဲ့လိုမျိုးပဲ သမားရိုးကျသွားနေကြတာမလား.. ကိုယ်တိုင်လဲ အင်းလေးကန်ကို အခေါက်ပေါင်းများစွာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သွားခဲ့ဖူးတယ်လေ ကလောကနေ အင်းလေးကို Hard Trekking လမ်းလျှောက်တာရော တော်တော်စုံနေပြီပြောရမယ်။ ဒီတစ်ခါ ခရီးတွေလည်း သွားလို့ရပီဆိုတော့ New Normal Life မှာ ပထမဆုံးခရီးအနေနဲ့ အင်းလေးကန်ထဲမှာ Adventure ဆန်ဆန် စီးမျောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အမယ် သူပါပေါ့ ဆရာမကြီး
TD တို့ ကယက်လှော်တာကတော့ Khakaborazi Adventure Touring နဲ့ပါ။ Link ပြပေးထားပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးညောင်ရွှေရောက်တာနဲ့ အဲ့နေ့မှာပဲ TD တို့ Activity လေးစခဲ့ပါတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်သွားရတာမို့ အချိန်လဲ မပုတ်အောင်ပါ။ ညောင်ရွှေရောက်တော့ Hostel မှာ အိတ်တွေထား ရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲ၊ မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ သူတို့လာခေါ်ပါတယ်။ Khakaborazi Tour အဖွဲ့ရှိတဲ့ လှေဆိပ်ရောက်တာတဲ့ စီးမယ့်လှေက အဆင်သင့် စောင့်နေပါတယ်။ ကယက်မစီးခင် ရိုးရိုးလှေစီးပြီး TD တို့ အရင်ဆုံး သွားရပါတယ်။ ကယက်စီးမယ့်နေရာမရောက်ခင်ထိဆိုရင် လှေကို တစ်နာရီကျော်လောက်စီးရပါတယ်။ ပုံမှန် ကယက်စီးမယ်ဆိုရင် မနက်ခင်းနဲ့ ညနေခင်း Sunset ကြည့်တာဆိုပြီး အချိန်နှစ်ချိန် ရွေးပြီး စီးလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ Soft Kayaking နဲ့ Hard Kayaking ဆိုပြီး ၂ မျိုးရွေးလို့ရပါသေးတယ်။ စစချင်းစီးမယ့်လူတွေကိုတော့ Soft Kayaking ကိုပဲရွေးစေချင်ပါတယ်။ TD တို့ကတော့ Soft မကျ Hard မကျ သွားခဲ့ပါတယ်
ကိုယ်တွေအဖွဲ့ လှချင်တော့ လက်တိုလေးတွေဝတ်လာမိတာ
သဒ္ဓါတို့သွားတဲ့အချိန်ကလည်း နဲနဲ ကို့ယို့ကားယားနိုင်သွားတယ် နေ့လည်ဖက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဒါမယ့်လဲ နေအရမ်းမပူ၊ မိုးလဲမရွာချတော့ တော်တော် ကံကောင်းသွားပါတယ်။ ကဲ တစ်နာရီကျော်လောက် လှေစီးပြီးတော့ TD တို့ ကယက် စစီးမယ့် နေရာကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ ကယက်လှေ၂ မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်။ Single နဲ့ Double ဆိုပြီး တစ်ယောက်စီး နဲ့ နှစ်ယောက်စီးလှေရှိပါတယ်။ TD ကတော့ တစ်ယောက်တည်း Try ကြည့်ချင်လို့ Single Kayak ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ TD တို့လည်းလှေပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ ကယက် စီးနည်း၊ လှော်နည်းတွေသင်ရပီလေ
အဲ့မှာတွေ့ရတဲ့ အမဲရောင်အဝိုင်းပြားပေါ်က ခြေထောက်ချပြီး အရင်တက်ရတယ်
ပါလာတဲ့ Founder အကိုကိုယ်တိုင် သေချာသင်ပေးပါတယ်။ ရန်ကုန်ကလူတွေဆိုတော့ ကယက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့က လုံးဝကိုအစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲ စိတ်ပူစရာလုံးဝမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သဒ္ဓါကိုယ်တိုင်က ရေအရမ်းကြောက်တတ်ပြီး ရေမကူးတတ်တာတောင်မှ ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကို အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာ သွားနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ လှော်တက်ကိုင်နည်းတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုဘယ်လိုထားရမယ်၊ လှေပေါ်ဘယ်လိုတက်ရမယ်၊ သွားနေတုန်း လှေကိုရပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုရပ်ရမယ်ကအစ သေသေချာချာသင်ပေးပါတယ်။ TD ကိုယ်တိုင်လဲ မလှော်ခင်တည်းက အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလေ
အမယိ ငါကွ တစ်ယောက်တည်းလဲဖြစ်တယ်
ဒီလို Post မျိုးရိုက်ချင်နေတာကြာပီ
အမယ် လွင့်နေပြီ တစ်ယောက်တည်း
Life Jacket၊ ရေစိုခံအိတ်တွေလဲပါတာမို့ အရမ်းစိတ်ချရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာပါလာတဲ့ အိတ်တွေကိုတော့ နားတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့လိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အိတ်တွေပါလာရင် ကယက်လှော်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်လဲ ပူစရာမလိုဘူးနော် အဲ့က Crew အကိုတွေကို ဖုန်းပေးထားလို့ရပါတယ်။ သူတို့တွေလည်း ဘေးမှတောက်လျှောက် ပါလာတာမို့ သေချာလေးရိုက်ပေးကြပါတယ်။ အားလုံးလဲ သင်ပြီးပြီ ကိုယ်တွေလည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကယက်ပေါ်စတက်လို့ရပါပြီ။ ပထမဆုံး ကယက်လှော်ရတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ ဘာနဲ့မှကိုလဲလို့မရပါဘူး။ အမြဲလိုလို လှေစီးပြီး သွားနေတဲ့ အင်းလေးကန်ထဲကို ကိုယ်တိုင်လှော်ပြီး သွားနေရတဲ့ ခံစားချက်က အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ စစချင်းတော့ တစ်ယောက်တည်း လှော်တက်တစ်ချောင်းနဲ့ ယောက်ယက်ခက်နေတာပေါ့။
အဲ့လို လှေ၃ စင်းဆုံဖို့ ဘယ်လောက်ကြာလဲသိလား
ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကတခြား လှော်ပြီး ရောက်သွားတာကတစ်နေရာ တော်တော်လဲပျော်ဖို့ကောင်းသလို ကိုယ်တိုင်လဲ အားကိုးတက်လာပါတယ်။ ရွေးတည်းက တစ်ယောက်စီး Single Kayak ကိုရွေးထားတာကိုး…. ၁၀ မိနစ်လောက် ဟိုလှော်ဒီလှော်လုပ်ပြီးတော့ အဆင်ပြေသွားပြီလေ။ စိတ်ကလဲ အရမ်းပါနေတော့ ဟဲဟဲ ဆရာမကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ တစ်ယောက်တည်း လှော်ချင်တဲ့နေရာကို Skill တွေပြပြီးလှော်တော့တာပဲ။
သဘာဝကြီးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်
ကယက်ဘလိုလှော်မလဲ ? 🚣‍♂️
ဒါကတော့ TD သင်ခဲ့ မှတ်ခဲ့သလောက်ကို ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးတာပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်လဲ သေချာသင်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ ကယက်လှော်တဲ့အချိန်မှာ လှော်တက်ကို Balance ညီအောင်ကိုင်ရပါတယ်။ လှော်တက်မှာလည်း အရှေ့အနောက်ပုံစံမတူပါဘူး။ ခုံးတဲ့ဖက်နဲ့ ချိုင့်တဲ့ဖက် ၂ ဖက်ပါပါတယ်။ ကိုယ်လှော်မယ့်လှေ အရှေ့ကိုရွေ့ချင်ရင်တော့ ချိုင့်တဲ့ဖက်ကို အောက်မှာထားပီး ရေထဲကိုချပြီးလှော်ရပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်ရင် ညာဖက်လှော်တက်ကို လှော်ရပါတယ်။ ညာဖက်ကိုသွားချင်ရင်တော့ ဘယ်ဘက်က လှော်တက်ကို လှော်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းတိုင်ပတ်နေရင်တော့ ကယက်ကြီးက ဒီနေရာမှာပဲ လည်ထွင်နေပါတယ်
လှေကိုရပ်ချင်ရင်တော့ ခုံးနေတဲ့ဖက်ကိုလှန်လိုက်ပြီး ရေထဲမှာ နဲနဲခပ်ပေးရင် လှေရပ်သွားပါတယ်။ ကဲ အဲ့ဒါတော့ ကိုယ်တိုင်ရောက်မှာ သေချာလေး Try ကြည့်ပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ လှော်နည်းတွေလဲသိသွားရော ဟိုဘက်ကပ်လိုက် ဒီဘက်ကပ်လိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း ပျော်နေတာ
TD တို့ ကယက်ကို ၂ နာရီလောက်လှော်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ ကျွန်းမျောတွေ၊ စိုက်ခင်းတွေ၊ ဒိုက်ပုံတွေကြားမျောလာတဲ့ ဗေဒါပင်တွေ၊ အင်းထဲက ရွာတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ အင်းသူ အင်းသား ကလေးလေးတွေပေါ့
Life jacket အပြည့်အစုံနဲ့
TD ဆို ကယက်အလှော်ကောင်းရင်း အိမ်ကြားတွေပါရောက်ကုန်တာ
နောက်ထပ်အရမ်းသဘောကျတဲ့ ရှုခင်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။ အဖက်ဖက်က တောင်တွေကာရံထားတဲ့အလယ် အင်းလေးကန်ထဲမှာ ကယက်တစ်စီးလူတယောက်စီနဲ့ တိုးဝှေ့လာတဲ့ လေနုအေးနဲ့အတူ မျောရတဲ့အရသာကလေ
ဟော အဝေးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ တောင်တွေနားမှာ မိုးတွေရွာနေတယ်လေ။ ကွက်ကြားမိုးဆိုတာမျိုးကို အင်းထဲကနေ သေချာကြည့်လို့ရပါတယ်။ သဘာဝအလှအပကိုချစ်တဲ့သူ၊ ခံစားတတ်တဲ့သူအဖို့ကတော့ ပြောမပြတတ်အောင် ရင်ထဲပိီတိဖြစ်မိမှာအမှန်ပါ။ အဲ့လိုနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်းလှော်ရင်းနဲ့ ဆီဆုံဆိုတဲ့နေရာထိရောက်လာကြပါတယ်။ Late Lunch လဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ အင်းထဲက ဒေသခံအိမ်မှာ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်တွေ အဖွဲ့လဲခြေကုန်လက်ပန်းကျရင်း အနားယူကြတာပေါ့။ ဒေသထွက်အသီးအနှံတွေ၊ ရေခဲပုံးကြီးနဲ့ သယ်လာတဲ့ အအေးတွေနဲ့ဧည့်ခံတော့ အမောကိုပြေရော…. အပြန်ကိုတော့ ဆက်မလှော်တော့ပဲ လှေနဲ့စထွက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
သူသာမကယ်ရင် လက်နှစ်ဖက်လဲ မလှုပ်နိင်တော့ဘူးလေ
Thanks Khakaborazi Adventure Touring
Please follow my instagram for more travel photo
Suncream မဖြစ်မနေလိမ်းသွားပါ​။ SPF များလေကောင်းလေပါပဲ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အင်္ကျိီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်သွားပါ။ အသားဖြူတဲ့လူတွေဆို နေလောင်တတ်လို့ပါ။
အပြန်ကျရင်တော့ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးနဲ့ အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးကတော့ သေချာပေါက်သောက်ရပါပြီ​။ Gym ပုံမှန်ကစားနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မပြောတတ်ပေမယ့် ကယက်လှော်တာက လက်မောင်းကြွက်သားကို အများကြီးအားစိုက်ရပါတယ်။ လှော်နေတဲ့အချိန်မသိသာပေမယ့် ညဖက်ရောက်ရင် ဇာတ်လမ်းစပါပြီ
ကိုယ်တိုင်အဆုံးထိလှော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသွားတာပိုကောင်းပါတယ်။ ကယက်စီးပြီးရင်တော့ လမ်းတစ်ဝက်ကနေ ပင်ပန်းလို့ ပြန်လှည့်လာတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
အခါအခွင့်သင့်ရင် အင်းလေးကန်ထဲ ခုန်ချပြီးရေဆင်းကူးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ရေတော်တော်တိမ်ပါတယ်။ ပျော်စရာလဲအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရေအရမ်းကြောက်တဲ့သူတွေကတော့ မလုပ်ပါနဲ့နော်။
Khakaborazi Adventure Touring ရဲ့ kayak package တွေကိုအောက်မှာ Link ပြပေးထားပါတယ်။
သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး စွန့်စားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေကိုတော့ အင်းလေးကန်ထဲမှာ တစ်ခါလောက် Kayak လှော်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပရစေ
ကလောကနေ အင်းလေးကို ၂ ရက်Trekking လျှောက်ခဲ့တဲ့ Blog Linkလေးပါ
Instagram – https://instagram.com/aye_thader_hlaing?igshid=1ddtvsvxptcp5
Special Thanks to https://www.facebook.com/khakaboraziadventuretouring